खाली पेटमा खान नहुने खानेकुरा के के ? « Mayadevi Online News Portal
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७७ शनिबार ०८:५०
स्वस्थ जीवनका लागि सही समयमा सही चिजको सेवन आवश्यक हुन्छ । मानिसको स्वास्थ्य उसको खानपानमा निर्भर रहन्छ ।
खानपान स्वच्छ, पौष्टिक र ठिक्क मात्रामा खाए यसले लाभ पुर्याउँछ । तर कतिपय अवस्थामा भने कुन समयमा के खाने र के नखाने भन्ने बिषयको जानकारी समेत आवश्यक हुन्छ । आज हामी खाली पेटमा खान नहुने चीजबारे जानकारी दिदैछौं ।
टमाटरमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन र एन्टिअसिक्डेन्ट भरपूर मात्रामा पाइन्छ । तर यसलाई खाली पेटमा खायो भने एसिडिकका कारण पेटमा नकारत्मक असर पर्न जान्छ । जसले पेट दुख्ने समस्या हुन सक्छ । अझ अल्सर पीडितका निम्ती खाली पेटमा टमाटरको सेवन हानिकारक हुन्छ ।
२. अमिलो फल
भिटामिन सी, फाइबर र एन्टिअक्डिेन्ट पाइने अमिलो फल जस्तै सुन्तला, अंगुर, अमिलो लगायतका फलको सेवन खाली पेटमा हानिकार हुन्छ । यसले पेट दुख्ने समस्या हुन सक्छ ।
४. पफ, पेस्ट्री
बिहान खाली पेटमा खाजामा पफ वा पेस्ट्री खानु हुदैन । यसमा एक किसिमको ढुसी हुन्छ । जसले खाली पेटमा हामीलाई दुःख दिन सक्छ ।
५. पेय पदार्थ
चिसो पेय पदार्थ त्यसै पनि शरीरका लागि लाभदायक मानिँदैन । अझ बिहानीको खाली पेटमा यसको सेवन झनै खतरनाक हुन्छ । बिहान उठ्ने बित्तिकै कार्बोनेटेड ड्रिक्स पिएमा क्यान्सर तथा मुटुका बिरामीलाई असर पार्दछ ।
एजेन्सी । विशेष गरी जाडो मौसम र शहरी जीवनमा कफी
काठमाडौं । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को सङ्क्रमणबाट जोगिन दैनिक गतिविधिमा
एजेन्सी । धेरै जसो मानिसहरु लौकाको जुस पिउन मन पराउँदैनन्
काठमाडौं । घाँटीमा व्याक्टेरियाको सङ्क्रमणबाट टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिललाई